Ukusika Mat, Ukusika okuncangathi, iBhodi yokufumana amanqaku - uAllwin
Ukucanda Mat for Silhouette, 8812, 12, x12, ukusika mat for Silhouette cameo
Ukucanda ukhuko lweCricut, 9924, 12 ″ x24, Ukusika iMat yoMenzi weCricut
Maleko 5 A3 Cutting Mat, 661A3, Self ukuphilisa mat ukusika mat
Maleko 5 A0 Cutting Mat, 661A0, Self ukuphilisa mat ukusika mat
Umsebenzi onzima wemingxunya emibini (ama-150 amashiti), i-095, i-Punch punch
I-Carft Hole Punch, 0301, iHole Punch
I-A4 Laminator, 8018, Multi Funchtion wtih Paper trimmer
Ibhodi yokufaka amanqaku, 9981, kunye nokuCoca iPhepha
I-Dongguan Allwin Stationery Co., LTD yasekwa ngo-1999. Ifumaneka kwindawo ye-Wan Jiang yedolophu yase-Dongguan, kwiphondo lase-Guangdong. Saseka i-Allwin Industry (HK) International Limited ngo-2009. Ninghai Allwin zokubhala Co., LTD yasekwa ngo-2010 Inkampani yethu eneemfuno ezizodwa ofisi zokubhala, iimveliso ezingundoqo ukusika mat, mqengqeleki mgawuli, ukusika iphepha, iphepha ngenqindi, iphepha isixhobo sokukhawulezisa Ukusebenza High kunye nemveliso iindleko eziphantsi, okwenza iimveliso zethu umgangatho ngokugqwesileyo, kwaye ixabiso kukhuphiswano kakhulu.
Iqela leshishini phantsi kobunkokheli be-General Manager uColin ukubonisa isimilo esihle seCanton Fair!
Sithetha ngeeFanon Fairs ezimbini ngonyaka kwaye azange zibekho. Oku kulandelayo yifoto yeqela lethu leshishini elinobuchule kunye nabathengi kumboniso:
Ekuqaleni kuka-2020, safumana ubhubhane okhethekileyo-i-COVID-19. Imizi-mveliso emininzi kuye kwafuneka iyeke ukuveliswa phantse iinyanga ezimbini. Emva kwamaxesha anzima, siye saqala imveliso eqhelekileyo. Nangona kunjalo, intsholongwane iya isiba mandundu kwihlabathi liphela. Omnye wabathengi bethu ...
U-ALLWIN –umthengisi wezinto zokubhala odumileyo
Umthengi waseBrazil wa-oda i-1 × 20-intshi yemveliso yezinto zokubhala kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Ekupheleni kukaJulayi 2019, yena kunye nenkosikazi yakhe beza kwindawo yethu yokugcina izinto ukuze bahlole. Emva kovavanyo, wanelisekile kakhulu ziimveliso zethu ze-ALLWIN. Sonwabe kakhulu ngale nto kwaye siyakholelwa ukuba oku kuzakuhamba ...
I-PVC Mat iphumelele ngempumelelo i-2.0 RoHS kuvavanyo olulishumi lwe-nonmetallic